ဆုံဆည်းရာ: အမေများနေ့.... ၅နှစ်မြောက် ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ရာ ပြန်လည်ဖော်ပြကဗျာ
အမေများနေ့.... ၅နှစ်မြောက် ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ရာ ပြန်လည်ဖော်ပြကဗျာ
Where are my mates who search for freedom and independence?
Then mankind’s sympathies come and knock my door.
Here, I’m alive, notacorpse yet,
Together, let’s work out asanice diplomat!
ဒါပေမဲ့ င့ါမှာ ရေဆာသွေ.ခြောက်လို့
ငါနဲ့အတူ-- ဒီဒုက္ခကို မျှဝေခံစားစရာ
ရိုင်းစိုင်းသူမုန်တိုင်းဟာ အရာခပ်သိမ်းကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ပြီ။
ရိုးသားမှုထဲ ဆော့ပြေးကစားနေသူ ကလေးများလည်းဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ
အဖြူအစိမ်းဝတ် ကျောင်းသားကျောင်းများသူလည်း ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ
လွပ်လပ်မှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဖွေရှာသူ ငါ့သူငယ်ချင်းများရော ဘယ်မှာလဲ
လိင်စိတ် ၁၅၀၀ အားနဲ့နှုပ်ခမ်းနီပါးများရော ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ
သဘာဝကပ်ဘေးနဲ့ အာဏာရအငတ်ခွေးတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်ဖျက်ဆီးမှုကြီး။
ဟာနေတဲ့ငါ့ရင်ဘတ်ထဲ တဖွဲဖွဲကြားနေရတဲ့ အသံတွေ
ကျနော့်ရဲ့ အကျယ်လောင်ဆုံးစကားများကို အသံမပါပဲလွှင့်ထုတ်လိုက်ပါရဲ့
ဘယ်အချိန်များ ကျနော်တို့ အိမ်တံခါးဝကိုရောက်လာမှာပါလဲ
စာနာမှုတရားဟာ ငါ့ပျက်စီးကြမ်းပြင်များကို တဖန်သစ်လွင်ပါစေလေ
ဖွင့်ထားတဲ့ ငါ့နှလုံးသားနဲ့ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါရစေတော့
စာနာမှုတရားဟာ ငါ့ဘ၀ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာ လမ်းပြပါစေလေ။
ခင်ဗျားတို့ သေနတ်များလည်း အခုတော့ သုံးစားလို့မရနိုင်ပါ
မသေမပျောက် အသက်ငေါက်တောက် ရှင်ကျန်လျှက်ပါပဲ
သံတမန်ဆန်ဆန် အားလုံးကို အတူတကွဖြေရှင်းကြပါစို့။